> Resource > Utility > Sida loo hagaajin Image BootMGR Dhibaatada kharribeen
Ay bilaabeen in ay kabaha ilaa hal galab iyo shaashad madow muuqday farrinta ah "image BOOTMGR waa musuqmaasuq. Nidaamka ma kabaha karo." Ma ahan in aan Windows Vista rakibo disc.
Windows Vista 64-yara
Waa maxay soo jeedinaya marka laga reebo in ay u diraan si ay u cusboonaysiiyaan dukaanka? Mahadsanid
Computer waa shay aad u gaarka ah si qof walba ay sabab u tahay dad badan oo la dokumentiyada gaarka loo kaydiyaa it on. Sidaas waxaa wanaagsan wuxuu noqon doonaa si ay u xaliyaan dhibaatooyinka si lama filaan ah ka dhacay nafteena by inay iska ilaali gaarka ah. BootMGR waa loader ah boot u ogolaanaya nidaamyada hawlgalka badan in la laga saaray computer la mid ah. Haddaba sidaas daraaddeed ayaa ka maqan ama musuq-maasuq ah file saameyn ku yeelan kartaa xawaaladaha ee kombiyuutarka. Marka aad hesho fariin qalad ah oo Windows ku guuldareystay inuu ku soo bilowdo, sida ugu horeysay si uu u xaliyo " image BootMGR waa musuqmaasuq "waa si aad u ogaato Windows rakibo disc in ay isku dayaan ah sida hoos ku cad:
Waxaa dayactir la Windows rakibo disc
1. Geli Vista Windows (ama Windows 7, haddii aad isticmaalayso this version) disc rakibaadda iyo computerka aad.
2. Dooro goobaha afka, ka dibna riix "Next".
3. Guji "Dayactir your computer".
Fiiro gaar ah: Haddii aadan haysan disc tan, la xiriir maamulaha habka ama soo saaraha computer gargaar.
Waxaa dayactir la Downlaods CD / USB
Haddii aadan haysan disk Windows ah oo aadan rabin in uu wax badan oo ku saabsan, ama weli jirto fariin xusuusin in codsiga uu maqan yahay ama musuqmaasuq, taas oo ka dhigaysa nidaamka ay ku guuldareysato inay kabaha, waxaad isticmaali kartaa barnaamijka saddexaad-qayb ka mid ah si ay u caawiyaan kabaha habka iyo dhiso, sida Wondershare LiveBoot , kaas oo kaa caawin kara si ay u xaliyaan dhibaatooyinka BootMGR iyo dhibaatooyin kale oo ka dhigaya kombiyuutarka ku guuldareysato inay kabaha kor u Windows. Waxaa taageera nidaamka booting ka CD, DVD iyo USB drive (Tani waa arrin aad u muhiim ah. Markii computer ma kabaha kartaa, barnaamijka lagu rakibay kombuyuutar waxba ma samayn karo caawiyay).
1. Geli drive CD, DVD ama USB ah, iyo bilowdo your computer.
2. Bilow your computer by doorashada "Boot ka LiveBoot" on Menu Boot ah.
3. Marka loading file la soo gabagabeeyo, Windows bilaabo, ka dibna LiveBoot menu bandhigo.
4. Guji "Windows Recovery" dusheeda oo ku dhacay "Boot Files Recovery" bidixda.
5. Sida ay edbinta ku saabsan "Boot Files Recovery", dooran bartilmaameedka Windows oo uu bilaabo shaqada iskaanka ah. Haddii ay jirto hal Windows oo keliya on your computer, waxaad iska indhatiri kartaa tallaabadan.
6. Haddii sawirka sheegay file ka maqan ama kharribeen, fadlan bilaabi soo kabashada. Haddii uu jiro file ma uu maqan yahay ama ku kharribeen, fadlan riix "Cancel" in ay xirto barnaamijka.
7. Markaas oo keliya u baahan tahay inaad hesho disk off your computer iyo guuleysatey kombiyuutarka, iyo nidaamka dib ugu soo laabtay wanaagsan markaas.
Ka sokow Windows Recovery, barnaamijka ayaa sidoo kale waxay bixisaa Data Recovery, Management digsi iyo Soo-kabashada Password, iyo sidoo kale xiriir Network dadka isticmaala si ay u baadhaan macluumaad online. Dhibic waa in ay maskaxda lagu hayaa waa in dhammaan xogta aad soo kabsaday ama unkay deegaanka WinPE tan aan soo jeediyay in uu kaydiyo on X drive (drive Boot) ee. Waxaad iyaga ku hayn kartaa ku drives kale adag kombiyuutarka ama drives adag dibadda ku xiran kombiyuutarka.